We Fight We Win. -- " More than Media ": Dr.Soe Min Concession Interview with DVB
Dr.Soe Min Concession Interview with DVB
Dr Soe Min,
I appreciate you what you said in interview.Please race the election in comming 2015 asamember of NLD sir.You areagood guy sir.
This doctor has mindfulness... whatagreat guy..!!!!.
ဆရာ့ လိုစိတ်ဓါတ်မျိုးနဲ့ ကြံ့ဖွတ် ပါတီမှာတောင်
သူနဲ့ အင်တာဗြူးထားတာ နှစ်ခု နားထောင်ပြီးပြီ၊
ဒါ ဆရာဝန်အစစ် ရေမရောဘူး၊ ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ အယောင်ဆောင်နေတဲ့ ကြံ့ဖွတ်အတုပဲ၊ တိုင်းပြည်အတွက် တန်ဖိုးရှိတဲ့လူပဲဖြစ်ရမယ်။